Nepal - ब्वाय फ्रम खैरेनी
घाघडान अनुवादक खगेन्द्र संग्रौला र मञ्जुश्री थापा घरीघरी नाम लिइरहन्छन्, प्रवीण अधिकारी, ३७, को । यी तन्नेरीको नाम किन पनि आउँछ भने हालसालै इन्द्रबहादुर राईका हाडेओखरजस्ता १६ कथालाई समेत अंग्रेजी जहाजमा राखिदिएका छन्, लङ नाइट अफ स्ट्रोम ।
साँच्चै भन्ने हो भने लीला लेखनमा गएपछिका राईका कथा नेपालीमै पढ्न पनि गाह्रो छ । उनले सोधेछन्, ‘कुन–कुन कथा छानिएको छ त ?’ ‘बाघ’, ‘झ्याल’, ‘खीर’ आदि कथाको बनिबनाउ सूचीमा राईले तत्काल संशोधन हालेछन्, ‘होइन, यिनीहरू त पहिले पनि गरेकै हुन् तर यसको अनुवाद राम्रो हुनै सक्दैन ।’ अब अलि सजिला कथाको अर्को सूची बन्यो । विपना कतिपयका १० र कथास्थाका आधा दर्जन कथा ।
यी युवा हलकारा शब्दभण्डारले भन्दा पनि लेखनशिल्पले सिँगार्न सिपालु छन् । अनुवादलाई पनि कताकता श्रुतिमधुर बनाइहाल्छन् । अनुवादकका रूपमा उनको यो पहिलो पाइला होइन । यसअघि पनि उनले सुभाष दर्नालको अ ल्यान्ड अफ आवर वन र आमोद भट्टराईको कथासंग्रह च्याप्टर्स पाठकको हातमा पुर्‍याइसकेका छन् ।
खासमा अनुवादकमा मात्र सीमित छैनन् प्रवीण । नयाँदिल्लीको प्रकाशक रूपाले केही वर्षअघि बजारमा ल्याएको उनको पहिलो पुस्तक द भ्यानिसिङ एक्टका केही कथा मस्र्याङ्दी खोला किनारको गाउँ आँबु खैरेनीको सेरोफेरोमा छन् । ‘द ब्वाय फ्रम बनौती’, ‘मायापुरी’, ‘फच्र्युन’ आदि कथाको भावभूमि आँबु खैरेनी नै रहेछ प्रवीणको जन्मथलो । दीपक अधिकारीले यसरी चिनाएका छन् उनलाई, ‘मध्य पहाडमा दु:खजिलो गर्ने किसान, साना व्यापारी र तिनका स–साना सपना र संघर्षका कथा भन्ने एक कटुवाल ।’
रूपासम्म पुग्ने सूत्र रहेछन्, जयपुरमा भेटिएका पेन्गुइनका सम्पादक अनुराग बस्नेत । पाठक प्रतिक्रिया, समीक्षा र टिप्पणी राम्रो पाए उनले । एक महिना पोखरा बसेर पुनर्लेखन गरी किताब छापिँदासम्म कालिम्पोङका अनुराग अलेफ हुँदै स्पिकिङ टाइगर पुगिभ्याएछन् । “काठमाडौँका प्रकाशकसँग राम्रो सम्पादक हुने हो भने हामी बाहिर जानु पर्दैन,” उनको अनुभव छ, “आईएनजीओहरूले सम्पादक र अनुवादकलाई क्वाँप्पै निल्दिहाल्छन्, अफिसमा दिनभरि घोटिने उनीहरू साहित्यका लागि एक अक्षर गर्नेवाला छैनन् ।”
लेखनबाहेक अन्य करिअरबारे सोच्दै सोचेनन् प्रवीणले । आँबु खैरेनीमा हजुरबुबाको आँगनबाट सुरु भएको स्कुल सनसाइन बोर्डिङमा ३ कक्षासम्म पढेपछि उनको रवाना भयो, बूढानीलकण्ठ स्कुलमा । त्यहाँ १० वर्ष कैदी भएर बसेको अनुभव छ उनीसँग । खैरेनीमै टीकाराम परियारको किताब पसलमा दुई रुपियाँ धरौटी राखेर कमिक्स र सुरेन्द्रमोहन पाठक, वेदप्रकाश शर्मा मार्का हिन्दी उपन्यास पढ्ने बानी लगाए उनले । जेठाबाठाले किताब साटासाट गर्दा उनलाई हुलाकी बनाउँदा रहेछन् । त्यसबीचमा उनी किताब चप पार्दा रहेछन् ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलमै पढ्दा उनले गन्तव्य निश्चित गरेका रहेछन्, साहित्य या फिल्म । लेखक बन्नु पहिले पक्का पाठक बन्नुपथ्र्यो । त्यसैले उनी कक्षा ४ देखि १२ सम्म लाइब्रेरियन बने । “मैले स्कुलमा सबभन्दा धेरै काम गरेको लाइब्रेरीमै हो,” उनी भन्छन्, “लाइब्रेरियन नवीन रायमाझीले मलाई राम्रा किताबतिर डोर्‍याइदिए ।” राहुल सांकृत्यायनको वोल्गा से गंगा र इटालो कालभिनोको ट्रिलोजीले उनलाई मोहनी लगाइदिए ।
कलेज जाने बेला सिनियरले निकाल्ने साहित्यिक पत्रिकाका पाना एम्बुलेन्स शैलीमा भरिदिने काम हुन्थ्यो प्रवीणकै । अभिनयमा मात्र नभएर पेन्टिङमा रुचि थियो उनको । नाटकको सेट बनाउन भागेर पुग्थे । राहुल गिरी, शिरीष दली, ठाकुर अम्गाईं उनका सहपाठी थिए । आदित्य अधिकारी एक ब्याच सिनियर ।
बूढानीलकण्ठपछि अमेरिका भयो उनको मुकाम । वासिङ्टन राज्यस्थित वालावाला गाउँको ह्विटम्यान नामक सानो कलेजमा पढे पूर्ण छात्रवृत्तिमा । समरको तीन महिनाजति आफैँले कमाएर खानुपथ्र्यो । केही समय घाँससास काटे र छाडे । तीन महिनाका लागि पाएको कथा लेखनको ग्रान्ट पनि सकिएपछि उनका साथी सुपरमार्केटअगाडि पोट्र्रेट कोर्न थाले । प्रवीणको काम ग्राहकको हात समातेर ल्याउने । त्यसले बियर र म:म खान पुगिहाल्थ्यो ।
जताततै स्याउ फल्थ्यो वालावालामा । कति दिन त फलफूल चोरेर पनि गुजारा चल्यो । त्यसपछि गए सान फ्रान्सिस्को । कलेजमा क्रियटिभ राइटिङ र वल्र्ड लिटरेचर नै पढेका थिए उनले । पोयट्री पढ्न गएछन् सुरुमा । प्रोफेसरले भनेछन्, ‘तिम्रो कविता कथाजस्तो छ, कथा कविताजस्तो छ । दुईमध्ये एउटा छान ।’ अब उनको रोजाइ कथा भयो, लामो लेख्न पाइने छुटका कारण । “म कलेजमा एक्टिङ सिक्न पनि गएकै हुँ,” उनी थप्छन्, “तर, मैले अंग्रेजी बोलेको कसैले बुझेन ।”
उनको पहिलो जागिर थियो सिलिकन भ्यालीमा । “मेरो तलब नै ३२ सय डलर थियो । तीन महिनापछि फेरि बढ्नेवाला थियो,” उनी रुटिन सुनाउँछन्, “बिहान साढे ५ बजेदेखि राती साढे ८ बजेसम्म काम गर्थें । साथी भेट्न जानुपर्‍यो भने रेलमा डेढ घन्टा लाग्थ्यो । नयाँ साथी बनाउने समय थिएन । मलाई लाग्यो, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी ?”
बारमा भेटिने मान्छे त साथी हुन सक्दैन थियो । जिन्दगीभरि कथा लेख्छु, किताब लेख्छु भन्ने मान्छेको यो हविगत उनलाई सह्य भएन । फेरि उनी प्राविधिक थिएनन् । उनलाई रिक्रुटिङको काममा अल्छी लाग्न थाल्यो । साथी सुश्रुत आचार्य (अहिले युलेन्स स्कुलका शिक्षक) कम्प्युटर छाडेर काममा जान्थे, प्रवीण त्यसमै कथा लेखेर बस्थे । त्यतिबेलाका कतिपय कथा छन्, द भ्यानिसिङ एक्टमा ।
त्यसबीचमा कहिले रेस्टुराँ त कहिले पाकिस्तानीको रक्सी पसलमा काम गरे । पैसा नभएका बेला सुश्रुतकी सानिमाको रेस्टुराँबाट भात आइपुग्थ्यो । नत्र वाईवाई चाउचाउ उमाल्यो, खायो । उनले आफैँलाई लगातार सोधिरहे– होइन, म के गरिरहेको छु ? लेखक बन्न आएको मान्छे । अमेरिकामा बसेर गरिब हुनुभन्दा काठमाडौँमै गरिब हुनु ठीक होइन र ?
काठमाडौँमा त केही भएन भने कमसेकम घरमा आमाले पकाएको भात खान पाइन्छ । जहाँ पनि हिँडेरै पुगिन्छ । त्यसपछि सुरु भयो– काठमाडौँको लफंगा लाइफ । रमाइलो जिन्दगी । बिन्दास जिन्दगी । बेपर्वाह जिन्दगी ।
त्यतिबेला आईएनजीओमा पसेको भए ५०–६० हजार रुपियाँको जागिर गाह्रो थिएन उनलाई । तर, उनीभित्रको लेखकले रोकिहाल्यो– अहिले छिरियो भने लेखक बन्ने सम्भावना फेरि सकिन्छ । अहिले धेरै तलब खाएपछि त्यो भन्दा कममा जाने छुट पाइँदैन । अहिले आएर उनलाई लाग्छ, तलब थाप्ने हतारो गरेको भए न आफ्नो किताब हुन्थ्यो, न आईबी राईको अनुवाद, न त वर्ड वारियर्स र ल.लितकै काम ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलकै सोम ढकाल (फिल्म गुडबाई काठमान्डूका निर्माता)ले १८ वर्ष पहिले नेपालीका लागि पहिलो च्याट साइट खोलेका थिए, सुस्केराडटकम । मञ्जुश्री थापा, सुषमा मानन्धर, सम्राट् उपाध्यायसँगै उनका पनि लेखरचना आए त्यसमा । नेपाली सेनाले प्रतिबन्ध नलगाउँदासम्म सराहना श्रेष्ठको समुदायडटवर्कमा पनि लेखे ।
“पछि आदित्य अधिकारीले मलाई साप्ताहिक स्तम्भ दिए, द काठमान्डू पोस्टमा । फोटो नछापिए पनि युवा पाठकले नोटिस गरे,” उनलाई सम्झना छ, “पत्रिकामा आउन थालेपछि ममीलाई अब छोराले पैसा कमाउँदैन भन्ने पक्का भयो ।” पत्रकार बा (गोविन्द अधिकारी)ले उनलाई न धाप दिए, न बाटो छेके ।
प्रवीणलाई अनुवादको काम दिएका रहेछन् आफ्नै बाले । हिमालय टाइम्सका लागि । एक शब्दको एक सुका दिने सर्तमा । बूढानीलकण्ठ स्कुलको छुट्टीभरि १ हजार ६ सय रुपियाँको काम गरेछन् उनले । गगन थापालाई जेल हाल्दा खगेन्द्र संग्रौलाको अखबारी लेख ‘हजारौँ गगन’को अंग्रेजी अनुवाद पनि उनले नै गरेका थिए ।
जनआन्दोलनका बेला पल्पसा क्याफे अनुवाद गर्न मन लाग्यो उनलाई । “नारायण वाग्लेलाई म बामार्फत चिन्थेँ,” उनी भन्छन्, “मैले सोधेँ, दाइले कलेज पढेको केटो भनेर वास्ता गर्नुभएन ।” त्यही सम्झाएर उनी वाग्लेलाई कहिलेकाहीँ जिस्काउँछन् पनि ।
उनी नेपाल फर्कनुको कथामा फिल्म पनि जोडिएको छ । अमेरिकामा कागबेनी फिल्म देखाउने जिम्मा लिएका थिए, कसिसदास श्रेष्ठले । कसिसमार्फत भास्कर ढुंगानासँग सम्पर्क भयो उनको । फिल्मले उनलाई सजिलै अमेरिकामुक्त गरिदियो ।
भास्करले काममा कति कजाए भने हरेक दिन दुई–चार हजार शब्द लेखाउँदा रहेछन् । चार–पाँच वर्षको बीचमा दुईवटा फिल्म लेखे, कोही मेरो र सुन्तली । दुवै व्यावसायिक रूपमा भने सफल भएनन् । उनले लेखेका सात–आठवटा त फिल्म नै बनेनन् । “मैले लेखेका कुरा फ्लप हुन्छन् भन्ने निश्चितै हो,” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ सहरी दर्शकका लागि बनाएको नक्कली नोस्टाल्जिया मात्रै छ । त्यो सक्कली गाउँले जीवन नै होइन ।”
भास्कर पनि प्राग (चेकोस्लोभाकिया)तिर पढ्न गए । त्यसबीचमा चार–पाँचवटा सर्ट फिल्म लेखे प्रवीणले । ती फिल्म विभिन्न फेस्टिभलमा गए । बुसानपछि सुन्तली अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर जाने बेला भुइँचालो आइहाल्यो । फिल्मको काम अड्कियो । उनले सिंहदरबारको चार शृंखलामै चित्त बुझाउनु परेको छ । राजनीतिक अपराधलाई लिएर जासुसी उपन्यासको खाका तयार छ ।
जतिसुकै अप्ठ्यारो घुम्तीमा पनि लफंगा–लाइफ छाडेनन्, प्रवीणले । उनी आफ्नै मर्जीमा फिल्मका स्क्रिप्ट र कथा लेख्छन् या अनुवाद गर्छन् । जागिरेले पनि गर्ने आखिर यस्तै काम त हो । तर, उनको जीवन अरूले हेर्दा पनि लफंगा छ, आफूले हेर्दा पनि लफंगा नै । “म मात्रै किन ? कला क्षेत्रका सबै मान्छे लफंगा लाग्छन्,” उनलाई लाग्छ, “कलामा एउटा सफलता पाउन दशकौँ लाग्न सक्छ ।” उनलाई प्रिय छ, आफ्नो लफंगा जीवन ।
पाँच वर्ष अमेरिका बसे प्रवीण । अमेरिका उनले बहुत आनन्द लिएको ठाउँ हो । त्यही भएर हातमा डिग्री परेन । उनी कतिसम्म मस्त भए भने स्नातकोत्तरका लागि आवेदन समेत दिएनन् । बौद्धिक भइनँ भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कलेज अफ आर्टस्मा ‘भिजिटिङ फ्याकल्टी’ छन् पाँच वर्षयता ।
एउटा अनुवादकका रूपमा नेपालबाट देशबाहिर लाने, देशबाहिरबाट यहाँ ल्याउने, मातृभाषाबाट नेपालीमा, नेपालीबाट मातृभाषामा लैजाने आदि थुप्रै काम छन् उनका । अनुवादको औचित्य कति छ भने नेपालीले नेपालीकै कथा पढ्न पनि अंग्रेजी चाहिने बेला भइसक्यो । “रहरले अनुवाद कसले गर्ला र ? सेवाभाव नभई छिर्न गाह्रो छ,” उनी भन्छन्, “नेपाली साहित्य राम्रो नभईकन न फिल्म राम्रो बन्छ, न अनुवादकै सार्थकता रहन्छ ।” यत्ति हो, अनुवाद भयो भने देवकोटाले नोबेल पुरस्कार पाउँछन् भन्ने कुराचाहिँ झूर लाग्छ ।
प्रवीणलाई घरमै बसीबसी गर्ने खेताला कामजस्तो लाग्छ, अनुवाद । चौरासी व्यञ्जनको उनलाई आशा छैन, दाल–भात खान पाए पुग्यो । “मेरो नेम र फेम अधकल्चो छ । न लेखकका रूपमा, न त अनुवादककै रूपमा,” उनी भन्छन्, “मेरो मूल्यांकन तीन जना समकालीन लेखक, अनुवादकले गरे पुग्छ ।”
जम्मा एकपटक राजनीतिक दलको टिकट लिएछन् प्रवीणले । त्यो पनि लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाको । नौ वर्षअगाडि साथीको भाइको करबलमा । उनलाई घेराबाहिर बसेर गाली गर्नै मजा लाग्छ । ट्राभलरका रूपमा हिँड्दा झम्सिखेल र सान फ्रान्सिस्को मेनु र सजावटमा फरक छैन । नेवारी खानाका पारखी प्रवीण बरू बुङमती र हरिसिद्धिको छोइला र ऐलाको स्वादमै बेस्मारी फरक भेट्छन् ।
सानेपामा एक्लै बस्ने अविवाहित प्रवीण सहरका चुल्ठे लेखक हुन् । साढे दुई वर्षअघि कैलाश घुमेयता कपाल काटेका छैनन् । अब १० इन्चको बुके बनाएर क्यान्सरपीडित बच्चालाई डोनेसन दिने विचारमा छन् । कपालको सरप्राइज पार्सल बनाएर पठाउने दिनको प्रतीक्षा छ, बस् ।
तस्बिर : रवि मानन्धर